Sagaal sano ka hor maanta oo kale waxaan weyney saaxib aad noogu weynaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sagaal sano ka hor maanta oo kale waxaan weyney saaxib aad noogu weynaa
Waxay ahayd Maalin Arbaco ah 04 Febraayo 2009. waxaan soo dhamaystay Barnaamijkii Maalinlaha ahaa ee aan Iadaacdda ka wedey, waxaa I soo wacay mid ka mid ah Shaqaalaha Idaacadda oo shaqada hore looga joojiyey kadib markii isaga mid kale ay ku dagaalmeen Idaacadda gudaheeda, waxa uu ii sheegay in Weriyihii ay dagaalameen Maanta xayiraadii laga qaaday isagana uu weli ganaaxii ku maqan yahay.
Anigoo taas ka duulaya ayaa waxaan wacay Agaasime Saciid Tahliil, waxaan waydiiyey halka uu joogo? Waxa uu yiri “Waxaan jooga Xafiiskayga” toos ayaan u abaaray Xafiiskiisa, waxaan kala hadlay arinta la igu war geliyey oo ah in labadii weriye ee ganaaxa ku maqnaa mid la amray inuu shaqada ku soo laabto midna aan weli loo yeerin. Agaasime Saciid Tahliil oo hadana ahaa Saaxiib aad iigu weyn waxa uu yiri “Iidle Cadaalad daradaas ma igu taqaanaa” waxaan iri maya, waxa uu yiri. “Anigaa u yeeray hebel Maanta, Hebelna Telfoonkiisa ayaan hadda raadinayey, laga bilaabo saacaddaan adigaa iga wakiil ah ee hadda u yeer beri ha soo shaqo tago haddii Alle idmo”, waan u mahad celiyey.
Halkaas markay sheekadu maraysey ayaa waxa uu ii sheegay in Maanta Shabaab u yeeray oo ay shir la yeelanayaan dhammaan Agaasimayaasha Idaacadaha Muqdisho waxa uuna intaa ku daray in uu hadda doondoonayo qof HornAfrik ka tirsan oo raaca, waxaan waydiiyey Ajendaha? Waxa uu yiri. “nalooma sheegin” waxaan iri Xasan Xuseen haku raaco (Madaxii Farsamada) waxa uu yiri. “Waa diidey” waxaan iri Bicir haku raaco (Madaxii Maamulka Lacagta) Waxa uu yiri. “Waa diidey”. Waxaan iri Ilaahayna talo saaro kaligaana aad, waxa uu yiri “Ii kaadi waxaan wacayaa Cabdulaahi kulmiye” waxa uu intaas ku daray “ car yuusan diidin”. Ilaahey mahaddiis wicitaan kadib Cabdulaahi kulmiye waa uu aqbaly inuu raaco Saciid Tahliil oo shir Shabaab ugu yeeray. Waxay ku balameen anigoo maqlaya Hotelka Global oo ay deganayd Idaacadda Shabeele, halkaas ayaanna isku macasalaameyney aniga iyo Agasimahaygii Saciid Tahliil.
Geeridii Saciid Tahliil.
Qiyaastii 30 daqiiqo ka dib anigoo dabaqa sare ee Idaacadda qado u doontay ayaa waxaa Telafoonkayga laga soo wacay Telfoonkii Agaasime Saciid Tahliil, waana la igu damiyey, (Baaq camal) waan yaabay sababtoo ah ma ahayn Telfoon aan baaq iyo wax la mid ah ku aqaano, waxaan is waydiiyey waxa Agasime Saciid Tahliil iiga baahday maadaama aan goor aan fogayn kala tagnay, Telfoonkii ayaan ku celiyey anigoo naxsan waxaan iri markii la iga qabtay “Agaasime ii waran? Waxaan raaciyey “meeshii ma tagtay” waxaa la iigu jawaabey. “War Agaasimahaaga ma aqaane Telfoonkaan ninkii lahaa waa la diley” meel aan joogo ayaan garan waayey, waxaan ku celiyey halkee maydku yaalaa? Waxa uu yiri “waxa uu yaalaa Agagaarka Xawilaada Dahabshiil”.
Halkaas ayaan ka doonay maydka Alaha u naxariistee Agaasime Saciid Tahliil, waxaan keenay Idaacadda dhexdeeda waxaana Saxaafada la hadlay Axmed Jaakad oo ahaa madaxii Idaacdda HornAfrik, waxa uu yiri. “Alaha u naxariisto Agaasime Saciid Tahliil” waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri. “dilka Agaasimaheenna waxba u dhimi mayso habsami u socodkii Idaacadda HornAfrik”. intii aan maydka ku maqnayn ayaa Tifatirihii Idaacada Max’ed Abuukar waxa uu hawada ka saaray Idacaadda taasoo looga mahad celiyey. Kadibna waxaan maydkii u qaadnay Cusbataalka Madiina si loogu hayo Habeenkaas.
Aniga dad kale oo aan ogahay habeenkaas gaw ma aynaan siin, Subaxdii dambe 05 Febraayo ayaan ku jarmaadney Cusbataalka Madiina, waxaan Janaaso kula dukaney isla Cusbataalka gudihiisa kadibna waxaan u qaadnay oo aan ku soo aasnay Qabuuraha Macalin Nuur ee KM13. Intaas kadibna waxaan ku soo laabanay saldhiggeenii oo ahaa Bakaaraha inagoo habqan ah. Maalinkaas waxaan wayney nin dhex joogiisu aad noogu waynaa oo aad u naxariis badan oo ay Shaqaalhuhu wada jeclaayeen. ALAHA U NAXARIISTO.
Hooyo Siraad Xaashi.
Agaasime Saciid waxa habeen walba soo wici jirtey Hooyadiis Siraad Xaashi oo xilligaas baadiye Qax ku joogtey kana carartay dagaal dhuusamreeb ku dhex maray AL-Shabaab iyo Ahlu-Sunna iyadoo hore dagaal saas oo kale ah uga soo carartay Cellbuur. waxay oran jirtey “Maandhow banaanka ha u bixin si aan laguu dilin, sababtoo ah haddaan maqlo geeridaada waa dhibkeyga”. Waxa uu dhihi jirey “Hooyo waa kaa yeelay oo warkaaga ma diidi karo laakiin waxaad ogaataa in aan waqti leeyahay oo aanan waqtigaas dhaafi Karin” waxay ugu jawaabi jirtey “Waa ogahay ee maandhow dadaal”. Si kastaba Waxaa laga joogaa sagaal sano geeridii naxdinta laheyd ee Agaasime Saciid Tahliil waxaan leeyahay Ilaahoow u naxariiso oo Xabaasha u nuuri..
Tags saciid tahliil
← Post-Davos Depression → Donald J. Trump Proclaims February 2018 as National African American History Month